Ikhaya » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Russia iindaba zokuhamba » IRashiya iza kuphehlelela 'inkqubo yokhenketho lokugonya' kubatyeleli bangaphandle
Urhulumente waseRussia wenza isikimu 'sokhenketho lokutofa' kubakhenkethi bamanye amazwe ukuba bafumane i-jav yokugonya ye-COVID-19 e-Russia.
Abakhenkethi bamanye amazwe baya kuba nakho ukufumana iJABV-19 jab yokugonya eRashiya
UPutin uyalele ukuba asebenze ngombandela wokugonywa kwe-COVID-19 kwabaphambukeli eRashiya ngaphambi kokuphela kukaJuni
Kukho imfuno enkulu yokhenketho lokugonya, latsho igosa laseRussia
Ngokutsho kwesithethi seKremlin uDmitry Peskov, iindwendwe zasemzini ziya kuba nakho ukufumana i-jov yokugonya i-COVID-19 e-Russia phantsi kwesikimu 'sezokhenketho sokugonya' esingaqaliswa kwiiveki ezimbalwa.
Le nkqubo iza kuphehlelelwa ngokukhawuleza kuba kukho ukwanda kwebango kolu gonyo, longeze njalo igosa.
"Inokuba yinto yenyanga okanye ezimbini, kuba kukho isidingo esikhulu sokhenketho lwesitofu," utshilo xa ebuzwa ukuba 'ukhenketho lokugonya' luya kuqala nini eRussia.
Kwangoko, uMongameli wase-Russia u-Putin wayalela urhulumente ukuba awusebenze umba wokugonyelwa i-coronavirus yokugonya abantu bamanye amazwe e-Russia phambi kokuphela kuka-Juni.
"Asizalisekisi ngokupheleleyo kuphela ibango lethu, kodwa sinokunika abemi bamanye amazwe ithuba lokuza eRashiya bazothatha isitofu sokugonya apha," u-Putin uqinisekisile esithi, imboni ye-Russian pharma ikulungele ukuqhubeka nokukhulisa imveliso yokuthintela.
"Isiko lasasazeka xa abantu abavela kumazwe ahlukeneyo, oosomashishini, kunye neentloko zeenkampani ezinkulu zaseYurophu beza eRashiya ngenjongo yokuthatha iyeza lokugonya le-coronavirus," utshilo uPutin.
"Ngokuphathelene noku, ndicela urhulumente ukuba ahlalutye yonke imiba yalo mbandela phambi kokuphela kwale nyanga, ukudala iimeko zokugonywa okuhlawulelweyo kwabaphambukeli kwilizwe lethu," wongeze watsho.